musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Zvinorwadza zveThailand zvekuvhara zvinofanirwa kumira, mabhizinesi anochema
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
PM inotaurira Thailand kukiyiwa
Iyo Thailand Center yeCOVID-19 Situation Administration yakarerutsa kumwe kudzora kwechirwere neChitatu, Gunyana 1, 2021, yeThailand kukiyiwa.
Parizvino kukiyiwa kweThailand kunosanganisira nguva dzekumira dzekuma9 manheru kusvika 4 am mumatunhu ayo "akasviba mutsvuku".
Mabhizinesi eThai ari kuda kuti kukiyiwa nekumira kuchimbomira uye kuparadzirwa kwejekiseni kuitwe zvinobudirira.
Mabhizimusi anga akavharirwa kweinopfuura mwedzi uye aunza matanho akasimba ekudzivirira chirwere mukuyedza kudzivirira kukanganisika kweramangwana.
Prime Minister weThailand Prayut Chan-o-cha akataura kuti 9: 00 pm kusvika 4: 00 am curfew mu 29 COVID-19 Matunhu "matsvuku", kusanganisira Pattaya Guta uye Bangkok, inogona kupfupiswa kana kusimudzwa, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu eECVID-19.
Vakati kunyangwe iyo Center for COVID-19 Situation Administration yakarerutsa kumwe kurwara kwezvirwere neChitatu, anotarisira kuti munhu wese acharamba akangwarira. Zvinorambidzwa zvinogona kuve zvakarezve kurerukirwa kana mamiriro acho akavandudzika.
Gen. Prayut vakati kupfupisa kana kusimudza nguva yekudzoka kunoenderana nehuwandu hwehutachiona, kufa, uye mamwe metric ane chekuita nedenda.
Mutungamiriri wehurumende akati aiziva kuti nguva yekumira pamba irikukanganisa nzvimbo dzevaraidzo, uye masangano anomiririra varidzi vavo emabhawa, mabhawa, nedzimwe nzvimbo dzehusiku vanoda kukurukura nezvekubviswa kwezvirambidzo neCCSA, asi anoramba achishushikana nezvevanhu vari kudirana kunzvimbo idzi.
Thai mabhizinesi anoda kuti kukiyiwa kumiswe nekukasira
Mabhizimusi mazhinji aive netariro mushure mezuva rekutanga kuvhurwa neChitatu, zvichitevera inopfuura mwedzi wekuvharwa nematanho ekuvharira aripo. Mabhizimusi mazhinji ari kushandisa matanho akasimba ekudzivirira chirwere kuitira kuti vadzivise kumwe kuvharirwa mune ramangwana, nepo komiti yakabatana yakumbira hurumende kuti isazivise nezvekukiya zvakare.
Joint Standing Committee paCommerce, Indasitiri uye Kubhanga (JSCCIB) yakumbira hurumende kuti isazomboitazve matanho ekuvharira semhinduro yeCOVID-19, asi panzvimbo pezvo kuti vatarise zvakanyanya pakuparadzirwa kwejekiseni nekutaurirana pachena neruzhinji.
Sachigaro weJSCCIB, Payong Srivanich, akati matanho ekuvharira akaitwa kweinopfuura mwedzi anga asina kukonzeresa kuderera kukuru kwehuwandu hwe itsva COVID-19 c(The AND Ace), asi pachinzvimbo chakakonzera kuenderera kukuvara kuhupfumi.
Zvimwechetezvo, Mutungamiriri weFederation of Thai Industries (FTI), Suphan Mongkolsuthee, vakati hurumende haifanire kudzosera matanho ekuvhara, vachiti mwero wekubaya nhomba ikozvino unofanirwa kusvika 70% yevagari, kana hurumende ichikwanisa kuzadzisa kuburitswa kwayo. chinangwa.
Nzvimbo zhinji dzezvitoro dzakasiiwa panguva yekukiya, dzakadzokera kuhupenyu nezuro, sezvo zvitoro nemresitorendi mazhinji atenderwa kuvhurwa.
PaMBK Center muBangkok, vazhinji vatengesi vavhura zvitoro zvavo nehutano hwakasimba uye matanho ekuchengetedza akaitwa. Dare rekudya ipapo rave kugadzirira zvakakwana kushanda nevazhinji vevashandi ikozvino vabaiwa zvizere. MBK Center, inozivikanwawo seMahboonkrong, inzvimbo hombe yekutengesa ine nhurikidzwa pfumbamwe muBangkok ine zvitoro, maresitorendi nenzvimbo dzinosvika zviuru zviviri.